Roborock Dya, onye na -ehicha ihe igwe na -ehicha mmiri nke kacha dị mmiri mmiri Akụkọ Ngwa
Roborock butere ụzọ na teknụzụ ọhụrụ na mpaghara nhicha mara mma, n'oge na -adịbeghị anya anyị enyochala Roborock S7 yana nke gi ebe mkpofu, ma ugbu a, ha na -agbanwe ngwaahịa iji meziwanye ihe dị adị, na -aga ọbụna na mbara ala ebe ụdị ugbu a yiri ka ọ na -akarị.
Roborock jiri Dyad tụgharịa ahịa oghere mkpanaka aka na Dyad, ụdị mmiri na -adị mmiri nke ọma. Ka anyị chọpụta atụmatụ nke ngwaahịa Roborock ọhụrụ a pụrụ iche.
Nke a Roborock Dyad na -amata ntụpọ site na iji usoro nhicha na -agbanwe agbanwe, si otu a na -ehicha, na -ehicha ihe na ihicha, na -agbaze mmiri siri ike na mmiri ruru unyi n'ime tank 620 ml. Ọ na -ewepụta mmiri dị ọcha n'elu ala ebe rollers ya na -arụ ọrụ iji wepu unyi.
Ọ nwere rollers abụọ n'azụ maka ihu yana Motors abụọ nwere ike rụọ ọrụ rollers atọ na mkpokọta, sistemụ pụrụ iche n'ahịa.
Ewezuga mmasị anyị maka teknụzụ, na Roborock anyị na -akọwa nke anyị
agụụ maka ihe ọhụrụ teknụzụ. Yabụ, Dyad bụkwa ngwaahịa ọsụ ụzọ
na ụdị ya. Site na sistemụ DyadPower, Dyad bụ naanị ihe nhicha oghere n'ime
mmiri na nkụ, nke igwe ihe ọkụ ọkụ ya abụọ na -anya sistemụ ọtụtụ
rollers, si otú a na -enye nhicha dị irè yana iwepụ unyi na a
gara aga, yana n'akụkụ ya. Anyị mepụtara ngwaahịa a nwere ọtụtụ
nwere ike iwepụ na mmiri ruru unyi na unyi kpuchie, na -eji a
usoro nhicha ọhụrụ - Richard Chang, onye isi ụlọ ọrụ Roborock.
Ke adianade do, o nwere sistemụ nhicha onwe onye na-akpaghị aka na ịpị bọtịnụ, yana ngosipụta LED nke ahụ ga -enyere anyị aka ịchọpụta mpaghara ala nke na -etinyekarị unyi, yana sistemụ mkpu olu nke etinyerela na ngwaahịa Roborock ndị ọzọ. N'otu ụzọ ahụ, Batrị 5000 mAh ya ga -enye ohere nkeji iri atọ na ise nhicha ma ọ bụ ihe ruru square mita 35.
Roborck Dyad ga -adị maka Europe na Nọvemba 11 maka ọnụahịa tụrụ aro nke € 449 na nnukwu ụlọ ahịa dị ka AliExpress.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Roborock Dya, oghere mgbochi mmiri na akọrọ kachasị